Mid ka mid ah waxyaabaha aanan ku wadaagi doonin qoraalkan ayaa ah inta lacag iyo waqti ah ee aan ku qaatay soo iibinta, qiimeynta, iyo tijaabinta qalabka podcasts-kayga. Laga soo bilaabo fiicni iyo istuudiyaha, illaa istuudiyaha is haysta oo aan ku qaadan karo boorsada dhabarka, illaa iyo makarafoonka USB waxaan ku duubi karaa laptop-ka ama iPhone… Dhammaantood waan isku dayay.
Dhibaatada ilaa maanta waxay had iyo jeer ahayd isku dhafka istuudiyaha iyo martida fog. Waa arrin caynkaas ah oo xataa aan la xidhiidhay qaar ka mid ah kuwa wax soo saara si aan u arko haddii aan qof ka heli karo dhisme nooc ah.
Ma ahan dhibaato kakan, laakiin waxay u baahan tahay xoogaa qalab jilicsan. Markaad leedahay martiyaal badan marka lagu daro martida fog, daahida martida fog waxay sababi doontaa dhawaaqa codkooda codkooda madaxa. Marka, waa inaad abuurtaa bas ka tagaya codka martida fog ee wax soo saarkii iyaga dib loogu soo celiyo. Tan waxaa loo yaqaan isku-dhafan.
Laakiin ma jiidi karo hareeraha barnaamijka wax lagu kariyo ee wadada lagu daro qalabka oo dhan, sidaa darteed waxaan isla gartay sidii loo abuuri lahaa isla qaabeynta adoo adeegsanaya bas dalwad leh oo ku socda barnaamijkayga 'MacBook Pro'. Oo weli waa xanuun ku jira badhida si loo dejiyo.
Waxaan booqanayay maanta sawir qaade aniga, Ablog Cinema, wuxuuna i weydiin lahaa hadii aan arko kan cusub RØDECaster Pro - Istuudiyaha Waxsoosaarka Podcast. Waa kuwan muuqaalka guud.
Laakiin sug… wax badan ayaa jira. Waa tan faahfaahin faahfaahsan:
Safar ayaan hayaa sanadka dambe si aan waxbadan u duubto Faylasha faylasha iftiinka leh ee Dell… Iyo cutubkan ayaa ila socon doona. Unuggu culeyskiisu waa in ka badan 6 rodol sidaa darteed ma noqon doonto wax aad u xun oo lagu wareego. Kudar makarafoonada, fiilooyinka, iyo samaacadaha waxaana laga yaabaa inaan u baahdo inaan wax ku helo shaagag, laakiin taasi waa caadi.
Haddii aan hal cabasho qabo waxay noqonaysaa in cutubku uusan hayn doonin rikoodh badan. Marka, haddii martidu qufacdo inta martida kale hadlayso… waad ku dhegsan tahay ama waxaad u baahan tahay inaad joojiso bandhigga oo aad dib u dhigto qaybta, ka dibna isku dheji qaybaha qaybaha wax soo saarka boostada. Aynu rajaynno in noocyada mustaqbalka ay awood u siinayaan duubista waddo-badan oo loo maro kaarka micro-SD iyo wax soo saarka USB.